गुलाबको फूलले सुसाइड नोट छोपेर दुई किशोरीले किन गरे आत्महत्या?
नारायण अधिकारी | २०७५ माघ २७ आइतबार | Sunday, February 10, 2019 २२:४७:०० मा प्रकाशित
'माफ गर्नुहोला। तपाईंकी छोरीको शव रक्सौलको रेल्वेको लिकमा फेला परेको छ। सनाखत गर्न आउनुस्।'
'एक कान, दुई कान, मैदान' हुँदै छात्राको मृत्युको खबर उनीहरु अध्ययनरत कलेज र पर्सा प्रहरीसम्म पुग्यो। उक्त खबर पाउनासाथ पर्साका एसपी रेवती ढकाल रक्सौलतर्फ आफ्नै नेतृत्वमा प्रहरीको टोली लिएर गए।
'नेपाल-भारत सीमा पार गरेर ७ किलोमिटर दक्षिण जानुपर्ने। मेन रोडबाट झरेर खेतको आली हुँदै ५ मिनेट हिँडेपछि हामी घटनास्थल पुगेका थियौं,’ एसपी ढकालले सुनाए, ‘यति टाढा नेपाली युवती कसरी आए?' कसैले अपहरण गरेर हत्या पो गरेको हो कि?’ एसपी ढकालले शंकाका नजरले घटना नियाले।
दुवैको शवको अवस्था यही हो। दुरी पाँच मिटरको फरकमा। दुबैको शव उत्तानो परेको। चौरासियाको घुँडाभन्दा माथिको भाग काटिएको छ भने शाहको घाँटी छिनेको छ। एसपी ढकालले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने, 'शवको अवस्था दर्दनाक छ।'
रक्सौल-सुगौली रेल्वे खण्ड अन्तर्गत कंगनाढालामा फेला परेको उनीहरुको शव भारतीय प्रहरीले उठायो। पोष्टमार्टम गर्न पठायो। शव अहिले पनि रक्सौलकै अस्पतालमा पोष्टमार्टमका लागि भनेर राखिएको छ। अनुसन्धानको एउटा पाटो भारतीय प्रहरीले सम्हालिरहेको छ।
यता एसपी ढकालले किन र कसरी भयो हत्या भन्दै वीरगञ्ज फर्केर अनुसन्धान अघि बढाए। 'हामीलाई कसैले अपहरण गरेर हत्या गरेको हो कि भन्ने शंका लागेको थियो,' एसपी ढकालले सुनाए, 'त्यसपछि हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान थाल्यौं।'
हत्याको कारण खोल्ने प्रमाण प्रहरीले फेला पार्छ, 'सुसाइड नोट'।
जहाँ सुरुमै लेखिएको थियो, 'आदरणीय आमाबुबा क्षमा गर्नुहोला...।'
'हामीलाई बाँच्न सक्छौ जस्तो लागेन। जे निर्णय गर्दैछौं, यो हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय हो। यसमा कसैको केही गल्ती छैन। अलबिदा।'
दुबै जनाले संयुक्त रुपमा लेखेको उक्त सुसाइड नोटमा हस्ताक्षर दुबै जनाको भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आइतबार बिहान सुसाइड नोट लेखेर पूजा गर्न भन्दै निस्किएका उनीहरु अन्ततः आत्महत्या गर्न रक्सौल पुगेको कुरा खुल्छ। रेलको लिकमा हाम फालेर आत्महत्या गर्छन्।
त्यसपछि खुल्छ आत्महत्याको कारण।
विवाह गर्न पारिवारिक दबाब।
अझ चौरासियाले आफ्नो मन्जुरी बिनै परिवारको दबाबमा टिकाटालो समेत गरिसकेकी थिइन्।
गुलाबको फूलले थिचेर राखेको नयाँ घडी उनले इन्गजमेन्टमै पाएकी थिइन्।
सबै तस्बिरः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सा